ငှားရန် - မြေကွက်၊ခြံ - ရန်ကင်း
_မြေကွက် များငှါးမည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊လုပ်ငန်းရှင်အများအတွက် 1။? ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ မိုးကောင်...
ငှားရန် - မြေကွက်၊ခြံ - မရမ်းကုန်း
ခ်င္းညီေနာင္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ဳိးေဆာင္
ငှားရန် - မြေကွက်၊ခြံ - တောင်ဥက္ကလာ
Please call 0943200669 or PM me for more information.( English, Chinese & Myanmar Speaking
ရန်ကင်းမြို့နယ်, ၁၃ရပ်ကွက်,မြနန္ဒာလမ်းသွယ် တွင်ရှိသော မြေအကျယ် - (70' × 100') ၊ (7000)sqft ရှိ ၂ထပ်တ...
ငှားရန် - မြေကွက်၊ခြံ - အင်းစိန်
အင်းစိန်မြို့နယ် မင်းကြီးလမ်း တွင်ရှိသောအကျယ်အ၀န်း(22500)sqft ရှိမြေကွက်ဌားရန်ရှိသည်။
အငး်စိန်မြို့နယ် ဘုရင့်နောင်လမ်းမပေါ် တွင်ရှိသော အကျယ်အ၀န်း(6300)sqft ရှိမြေကွက်ဌားရန်ရှိသည်။
ငှားရန် - မြေကွက်၊ခြံ - ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း
​တောင်​ဒဂုံ အမှတ်​ ၂ လမ်​းမ​ပေါ်​မြေကွက်​ကျယ်​ဌားမည်။ဆီဆိုင်​ , car showroom ဖွင်​့ရန်​သင်​့​တော်...
ငှားရန် - မြေကွက်၊ခြံ - မင်္ဂလာဒုံ
Land For Rent In Mingalardon Township
အမှတ်(၁၉) ၊ မလိခလမ်း ၊သစ်ဆိမ့်ကုန်းရပ်ကွက် ၊မင်္ဂလာဒုံမြို ့နယ်တွင် ပေ(40×150)ft ,(6000) sq...